बि.सं.२०७३ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७३ । नेपाल सं. ११३६ । योग सं. ३७ । कार्तिक महिनाको २६ गते शुक्रवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१६ नोभेम्बर महिनाको ११ तारिख ।
योगः हर्षण योग, १३:५७ बजेपछि बज्र योग ।
तिथीः शरद् ऋतु कार्तिक शुक्लपक्षको द्वादशी तिथी ।
नक्षत्रः उत्तरभाद्रपदा, २२:०७ बजेपछि रेवती ।
करणः बव १५:३६ बजेसम्म उपरान्त बालव करण ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७:१२ बजे ।
राहुकालः १०:२६ बजेपछि ११:४७ बजेसम्म ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन अनपेक्षित रुपमा विभिन्न खालका अपजशको सामना गर्न पर्नसक्छ । एकाएक खर्चको बृद्धि हुने र गर्जोटार्न धौधौपर्ने तथा नहुनेकाममा बढी मनजाने हुनसक्ने छ । अगाडि सारिएको काममा बाधाबिघ्नता आयो भन्दैमा हतास भइहाल्न भने परिहाल्दैन, संघर्ष एवम् अधिक परिश्रमले अपेक्षा गरिएको क्षेत्रमा केहीलाभ हुनसक्ने छ भने खासै योजनाभित्र नपारिएको काम बनेर आकस्मिक लाभ हुनसक्नेछ । साथ सहयोग पनि मिल्नेछ । मठमन्दिरको दर्शन, तीर्थको यात्रा एवम् मान्यजनलाई भेट्घाट गर्ने आदिमा खर्चको सदुपयोग गर्नाले प्रतिकूल ग्रहफल कमगर्न मद्दत हुनेछ । आज देवी भुवनेश्वरीको दर्शन भक्ति गर्नु उत्तम हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आयकर ग्रहगोचर परेको छ । कसैकसैलाई परिश्रमविनाको धर्नाजर्न तर्फपनि मन आकर्षित हुनसक्ने छ, जसले नैतिकतामा प्रश्न चिह्न लगाउनसक्ने छ ख्याल गर्नुहोला । सामान्यतया पुरुषार्थ बृद्धि हुने, प्रसंशा मिल्ने र सहयोग प्राप्ति हुनाले चित्त शान्ति हुनेछ । व्यवसायिक व्यस्तता र प्रगति एवम् उन्नति हुनेछ । विद्यार्थीहरु परीक्षामा उर्तिण भइने र हौसला मिल्ने छ । यात्रा हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । नयाँ व्यक्तिसँग सुमधुरसम्बन्ध स्थापित हुनेछ । आज यहाँलाई दुई अंक, सेतो रङ्ग तथा दीनदुखीको सेवा फापकर हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आत्मबल बढाउन र समयको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा केही राम्रो अवसर प्राप्त हुनसक्ने देखिएको छ । धेरै हौंसिन भने अल्लि नहुने समय छ । बढी हौंसिदा बन्नै पर्ने काम नबन्न पनि सक्नेछ । सामान्यतया मानसम्मान बढ्ने तथा पदप्रतिष्ठा प्राप्ति हुनसक्ने ग्रहगोचर परेकोले राजनीति, समाजसेवा वा नोकरी आदिमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने लक्षण छ । व्यापार व्यवसायबाट ठिकै लाभ गर्नसकिने छ भने उच्च आहोदाका व्यक्तित्त्वसँग भेटघाट हुनसकिने र आडभरोसाजन्य आश्वासन मिल्नसक्ने छ । यहाँलाई आज एक अंक, रातो रङ्ग शुभ रहने छ भने आज तपाईँले विद्वान एवं मान्यजनबाट आर्शिवाद लिनु उचित देखिन्छ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सात्त्विक विचार र आस्था बढ्नाले धार्मिक कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ । स्वजनसँगको भेटघाट र योजनाआदिको बारेमा संवाद हुनसक्ने छ । केही अबरोधको बाबजुत व्यापार व्यवसाय एवं उद्यमजन्य पेशागत कार्यमा सफलता मिल्ने छ । अनुकूलतापूर्ण वातावरण सृजना हुनाले साहस उमङ्ग र कार्यमा रुचि पनि बढेर आउने छ । सम्मानित रुपको निमन्त्रणा मिल्ने तथा औपचारिक कार्यक्रम आदिमा सरिक हुनपाइने छ । ईज्जत प्रतिष्ठा एवम् कान्ति बढ्नेछ । बढी ईच्छ्याएको काममा आउने बाधाब्याबधान हटाउन भैरवदेवको दर्शनभक्ति गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन केही संघर्ष गर्न पर्ने खालको देखिएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्ने ग्रहगोचर रहेकोले आहारविहारमा ख्याल पुर्याउनु पर्ला । शत्रुपक्ष सक्रिय हुनसक्ने र कार्यक्षेत्रमा पनि केही अबरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ तथापि हतोत्साहित चाहीँ भइहाल्न पर्दैन । सकारात्मक सोँचको विकास गरी धैर्य र संयमको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नचिताएको तर्फबाट आकस्मिकरुपमा केही भौतिक उपलब्धि हुनसक्ने छ भने सावधानि पूर्वक गरिने कार्यबाट केही लाभ पनि हुनेछ । आठ अंक, रातो रङ्ग आज तपाईँको लागि शुभ रहनेछ भने बाधाबिघ्न निवारणको लागि आज तपाईँले कन्या कुमारीलाई सेतो वा रातो पदार्थ दान दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन भौतिक सुखकर रहनेछ । जीवन साथीको वा विपरित लिङ्गीको सहयोग मिल्ने र प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउनेछ । उपलब्धिकर यात्रा हुनसक्ने तथा सहयोगी स्वजनहरुसँग भेट्घाट हुनपाइने छ । व्यापार व्यवसाय आदिबाट हैसियत अनुसारको लाभ मिल्ने देखिन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने एवं कार्यक्रम आदिमा सरिक हुन पाइनेछ । विवाहयोग्य युवायुवतीको लागि वैवाहिक कुरा चल्नसक्ने छ । सात अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग आज तपाईँको लागि शुभ रहने छ भने विपरित लिङ्गीको सेवा गर्नु वा सेतो रङ्गको वस्तु दान दिनु उचित हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन पुरुषार्थ बढ्ने कार्यक्षेत्रमा आएको अड्चन हटाउन प्रयत्न हुनेछ भने विपक्षिका उपर प्रतिकार गर्ने योजना पनि बन्नेछ तर, ग्रहले त्यति धेरै बल दिइसकेको छैन जसको कारणले आँट आएपनि काम फत्ते गर्न अल्लि गार्हो पर्नेछ । ससाना काम एवं व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । र आम्दानी बढ्नसक्ने छ । शारीरिक आरोग्यता बढ्ने, अनुहारमा कान्ति बृद्धि हुनेछ । आज यहाँको लागि छ अङ्क, हरियो रङ्गको प्रयोग र बढी आँट गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न गुरु वा विद्वान मान्यजनको वा गाईको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आत्मप्रशंसाको आसक्ति बढेर जाने गोचर परेको छ । महत्त्वाकांक्षी मनोविज्ञानको व्यवहार देखाउनाले व्यक्तित्त्वमा ह्रास आउनसक्ने छ । भएर पनि नभएजस्तो अर्थात सह नहरहे जस्तो पर्नसक्ने छ । अलि बढी जोड गरिएको काममा अदृष्य रोकावट आउनसक्ने छ । आज बोलीवचनको व्यवहारमा पनि संयम अप्नाउनु उचित हुनेछ । अर्काको चियोचर्चोमा समय दिँदा आफ्नो कार्य अधुरो रहनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । पाँच अङ्क, रातो एवं सेतो रङ्गको उपयोग र भगवान भैरवदेवको दर्शन भक्ति गर्नाले दुःख कम गरी सुख बृद्धि हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन कार्यक्षेत्रमा केही अड्चनको सामना गर्नपर्नसक्ने छ । अल्मल्याउने र अबरोध गर्ने तथा ईष्या गर्नेहरु बढ्ने छन् । आज शुभेच्छुक एवं सहयोगीको कमि महसूस हुनेछ । आफ्नै विचारमा पनि संकिर्णता आइदिनाले मानसिक द्वन्दको शिकार भइनसक्ने छ । सल्लाह गर्न बस्ने तर झगडा गरेर उठ्ने जस्तो पर्नसक्ने सम्भावना भएकोले बैठक आदिमा नया“ विषयमा चर्चा गर्दा संयम हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । मनलाई सकारात्मक तरिकाले सम्हाल्ने र स्वकार्यमा प्रयत्नशिल रहनाले संघर्षबाट केही लाभ भने गर्नसकिएला । माँ सन्तोषीको श्रद्धाभक्तिको साथमा आमासमानकी मातृशक्तिको आर्शिवाद आज तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन हिम्मतिलो र सक्रियभूमिका हुँदाहुँदै पनि मुख्य काममा अपेक्षा गरेबमोजिम फल नपाइने हो कि भन्ने शङ्का देखिएको छ । तथापि ठूलो परिणाममा नभएपनि केही उपलब्धि भने हुनेछ । आज गर्नै खोजेको कार्यलाई मान्यजनको अनुमति नमिल्न पनिसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । बा“की पक्षमा उत्साह–उमङ्गिलो दिन मान्नसकिन्छ । स्वजनबाट सहयोग मिल्ने र प्रतिस्पर्धामा विजय भइने छ । सामान्यतया आकस्मिक लाभ एवं प्रख्याति मिल्नेछ । आज गुरुजनको आर्शिवाद लिनु वा उहाँहरुलाई खुशी बनाउनुले मुख्यकाममा आउने अबरोध निवारणको लागि मद्दत गर्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आर्थिक धन सञ्चय हुने ग्रहगोचर परेको हुनाले व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो धनलाभ गर्नसकिने छ । कसैकसैलाई पेशा इतरको क्षेत्रबाट पनि अर्थलाभ हुनसक्ने छ भने गुप्तधन प्राप्ति हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । यथोचित उपलब्धी हुनाले काममा हर्ष उल्लास एवम् उत्साह बढ्ने छ । वाणीको ओज बढ्ने हुनाले बोलीबचनले मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्न पनि सकिने छ । परोपकार एवम् समाज सेवाका कामकार्यमा पनि सरिक हुने तथा भूमिका निर्वाह गर्ने मौका मिल्नसक्ने छ । आज यहाँको लागि दुई अंक, सेतो रङ्ग उपयोगी हुनेछ भने सन्तोषीमाँको सेवा आराधना पूण्यप्रद हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन शारीरिक आकर्षण एवम् मानप्रतिष्ठा बढ्नेछ भने मिठो खानेकुरा प्राप्ति हुनसक्ने छ । व्यवसायबाट धनलाभ हुने एवं भौतिक सुख र आफन्तजनबाट प्रशंसा पनि प्राप्ति हुनसक्ने देखिन्छ । अभिष्टकार्यमा सफलता मिल्नसक्ने गोचर रहेको छ, ईच्छित कार्य पूर्णताको लागि दृढताको साथमा अगाडि बढ्नसकिने छ । कार्यक्षेत्रमा तथा सामाजिक जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुन पाइनसक्ने छ । नयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । आज यहाँले पितृको नाममा गरीब दीनदुःखीहरुलाई भोजन खुवाउनु वा दान दिनु विशेष शुभकर हुनेछ ।